Isimada Puntland Oo Tacriif Cusub U Sameeyey Marsadda Magaalada Boosaaso Soona Af Jaray Khilaafkii – Heemaal News Network
December 6, 2017 Dhaqaalaha
Isimada Puntland oo maanta shir ku qabtay Hotel Gacayte ee magaaladda Bosaso ayaa soo bandhigay go’aan lagu xalinayo muranka ka dhashay kordhinta khidmadaha iyo cashuurta ee badeecooyinka ka soo dega dekeda Bosaso .
Qoraalka isimada oo ka koobnaa afar qodob waxaa ku saxiixnaa Boqor Burhaan Boqor Muuse, Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan, Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin, Beeldaaje Cali Beeldaaje Farax,
Suldaan Ciise Maxamed Ciise iyo wakiilka Beeldaajaha, Beeldaaje Yaasin Beeldaaje Cabdullaahi, waxaana lagu sheegay inuu yahay Kumeel gaar ah.
Shirka Waxaa khudbado ka jeediyay dhammaan isimadii ku saxiixnaa go’aanka, waxaa kaloo shirka hadalo kooban ka jeediyay Masuuliyiinta ka socotay xukuumadda Puntland, Ganacsatadii,
Nabadoonadii, Aqoonyahanadii iyo Haweenka, dhammaantoodna waxay soo dhaweeyay go’aanka isimadda.
Inkastoo shirka aan lagu faahfaahin Tariifada kumeel gaar ah ee ay isimadu soo saareen, balse sida warbaahintu ogaatay tariifadii hore ee dowladu soo saartay ayaa isbedel lagu sameeyay, waxaana isla maanta isimadu u dhiibeen Wasiirka Dekedaha Puntland iyo Wasiiru Dowlaha Maaliyadda, taasi oo la doonayo inay dhaqangaliyaan.
Go’aanka isimadu ka gaareen murankii dekeda ayaad la oran karaa wuxuu ahaa mid loo sameeyay isu soo dhawayn dhamaan dhinacyada muranku u dhexeeyey, ganacsatadada ayaa oggolaaday qaybo ka mid ah kordhinta tireefada canshuuraha iyo khidmadaha, taas oo ku xiran in aan dib loo kordhin karin mar danbe tan iyo inta laga dhisaayo dekadda Boosaaso.
Taliyaha Ciidamada Booliska Gobolka Bari Oo Xilkii ku Waayay Qaraxyo ka Dhacay Boosaaso.
February 8, 2018 Soomaaliya
Gashaanle sare Cabdi Xakiin Yuusuf Xuseen oo ahaa Taliyihii booliiska gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa maanta xil ka qaadis lagu sameeyay kadib markii lagu eedeeyay in uu ku fashilmay shaqadii loo xil saaray. Guddiga […]
Mudaharaad Sababay Dhimasho Oo ka Dhacay Magaalada Boosaaso.(Sawiro)
Inta la hubo hal qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday dibad baxyo rabshada wata oo maanta galinkii hore ka dhacay qaybo badan oo kamid ah magaalada ganacsiga Puntland ee Bosaaso. Dibad baxyadan ayaa ka […]
Puntland Oo ka Digtay in la Qabto Shir Beeleed aysan Ogeyn Maamulka.
War Qoraal ah oo ka soo baxay dowlad gobolleedka Puntland ayaa lagu mamnuucay qabashada shirar uusan ogeyn maamulka. Maamulka ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay deegaanno ka tirsan Puntland ay ka dhacayeen shirar ka […]